Kophii Kaayyoo tamsaasaa – Guraandhala 20, 2017 – OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATA
#AadaaOromoo-Sirni Baalli Wal harka fudhiinsa Oromoo Booranaa Guraandhala 28, 2017 aga Bitootessaa 07,2017 ykn akka enna Habashatti (guraandhala 21-28/2009) Areeroo Gooroo ardaa jilaa BADHAASAAtti gaggeeffama. Kana wana ta’eef,Ummanni Oromoo baargama fi biyya keessaa jirtan Raaba Gadaan kabajaa fi ulfinna guddaa waliin yaamicha isan godhaniiru!
Abbaan Gadaa 70ffaan aab Guyyoo Gobbaa ardaa kanatti baalli isaa abbaa Gadaa 71ffaa Kuraa Jaarsootif kenna. Enni 70 ykn 71 tokko kun ka eegii sirni Gadaa jalqabamee adoo hin ta’inu ta eegii abbaan Gadaa Gadayoo Galgaloo sirna Gadaa ka qara jidduutti laafee ykn waaree haaressi dhaabe asiiti akka ta’ellee isan hubachiisu feena.
Gadayoo Galgalooti dura Booranni walfaana abbooti Gadaa 200 olitin akka bulee jaarroleen argaa dhageetti dhalootaaf ibsa kennanii kennas jiru.
AADAAN NAFA, NAFA ABBAATTI MIDHAAFATA!!!!!